Soo dejisan Metapad 3.6 Standard iyo Lite – Vessoft
Soo dejisan Metapad
Metapad – tafatirihii text size dhakhso ah oo yar yar. Software waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo muuqaalada waxtar leh, oo iyaga ku dhex jiraan shaqada la files text of size waaweyn, goobaha font, aan xad burin ama ku celiyaan ee ay falsayeen, auto-indent hab iwm Metapad kale oo ku jira nidaamka caqli goobidda iyo eray-bedelka, waxa ay taageertaa hyperlinks iyo awood u xisaabsan characters, dun ama size guud ee dokumentigan qoraalka. Software ayaa gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar oo uu leeyahay si fudud loo isticmaali interface.
La shaqee files text of size waaweyn
Meeshay ee far-
Search Intelligent iyo bedelka erayada
Metapad Software la xiriira:
Tafatirka Text qalab A awood for khariidad ee waraaqaha heerka xirfadeed. software The qalabeysan yahay qalab gaar ah nidaaminta document sare.
العربية, English, Українська, Français... EditPlus 4.1
English, Français, Español, Deutsch... Notepad++ 7.1 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... LibreOffice 5.2.2 iyo 5.2.3 beta 1
العربية, English, Українська, Français... Evernote 6.3.3.3502
العربية, English, Українська, Français... Tango 1.6.14117